မိနျးမသားတို့ ရငျဖှငျ့ရာ Group မှာ လာရောကျရငျဖှငျ့ထားတဲ့ ရငျဖှငျ့စာ (၉) - Tameelay
မိနျးမသားတို့ ရငျဖှငျ့ရာ Group မှာ လာရောကျရငျဖှငျ့ထားတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျရဲ့ ရငျဖှငျ့စာလေးတှေ မြှဝခေဲ့တာဆိုရငျ အမှတျစဉျလေးတှနေဲ့ (၈) ထိပွီးခဲ့ပါပွီ . . .
အခု အမှတျစဉျ (၉) အနနေဲ့ သမီးလေးတဈယောကျ ရငျဖှငျ့ထားတာကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော . . .
ညီမခဈြသူက ညီမအပွငျနောကျကောငျမလေးထားပါတယျ မသိအောငျထားတာပမေယျ့မစုံစမျးရပဲပျေါလာတာခညျြးပါပဲ
အဲ့ဒါကို သူက သူ့ကိုအပွဈပွောလို့ စိတျပကျြပါတယျတဲ့ညီမသိလိုကျရတာ ၄ယောကျတောငျရှိနပေါပီ
ညီမမှာ သူ့အရငျကလညျး ဘယျယောကျြားလေးနဲ့မှ မရိုးမသားမပတျသကျသလိုသူနဲ့ခဈြသူ ဖွဈပီးတော့လညျး သူ့အပွငျဘယျသူမှမရှိပါဘူး
သူနဲ့စကွိုကျထဲက တဈနိုငျငံစီဖွဈနတောပါသူ မွနျမာပွညျပွနျလာတော့လညျး တဈမွို့စီနနေရေပမေယျ့
ညီမဘကျက ဒီနထေိ့ သူ့ပျေါသစ်စာမပကျြပါဘူးသူ့လုပျရပျက တဈခါနှဈခါ မ ကလို့ပွောမိတဲ့သူက မှားသှားလားရှငျ့
ညီမဘကျက သူ့ပျေါ မဟုတျတာလုပျဘူးရငျ ဖွသောပါသေးတယျ
ခုတော့ သူ အကူအညီလိုတိုငျး ကူညီဖွညျ့ဆညျးပေးတဲ့သူကသူ့အတှကျ ဘာမှမဟုတျသလိုပါပဲ
ညီမလေ အပိုမပွောပါဘူး သူနဲ့အပွငျသှားရငျbusကားခ ၂၀၀တောငျ ညီမပဲပေးတာပါ
သူက ပဲခူးကပါ ခု သူတို့နားက မိနျးကလေးနဲ့ထပျကွိုကျနပေါတယျသူတို့ ၂ယောကျပုံတှပေို့လာတယျ ပွတျခငျြတယျပေါ့
သူမိတျဆကျပေးခဲ့တဲ့ သူ့အဈမကိုပွောပွတော့လညျးကိုယျပဲ ငွိုငွငျခံရတယျညီမက သူ့အတှကျ ဘယျလိုလူဖွဈခဲ့ရလဲ မသိတော့ပါဘူး
သူနဲ့ခဈြသူဖွဈတာ ၄နှဈကြျောပါပီစကွိုကျတုနျးက သူ့အဈမအရငျး ဝမျးကှဲတို့နဲ့ ပေးသိတယျ
ပေးသိလို့လညျး တကယျခဈြတယျထငျခဲ့ပါတယျ နောကျတော့ အဈမရငျးက လူမြိုးမတူလို့ အသိုငျးအဝိုငျးမတူလို့ သဘောမကဘြူးဆိုလို့ silentတှဲခဲ့တာ ဒီနထေိ့ပါပဲ
ခုတော့ ညီမကို လူရာမသှငျးတာလို့ပဲ နားလညျလိုကျပါတယျညီမဆီကတော့ အကြိုးအမွတျအကုနျယူတာပဲ
သူ က ညီမကို အရူးလုပျနလေညျးသူ အဆငျမပွဘေူးလို့ ငွီးတှားလာရငျမကွညျ့ရကျတော့ အဆငျပွအေောငျ လုပျပေးမိတာခညျြးပဲ
ခု ကွိုကျနတေဲ့မိနျးကလေးနဲ့ ဆိုညီမသိသှားတာတောငျ ဂရုမစိုကျပဲ rsတငျပါတယျ
ညီမလေ အကုနျ ပွောပဈလိုကျခငျြပမေယျ့ပွောမိရငျလညျး ကိုယျကပဲငွိုငွငျခံရမှာမို့လူမသိတဲ့ကှယျရာမှာ အလူးအလှိမျ့ပဲ
သူ့လုပျရပျ ညီမအပျေါ ဆကျဆံနတေဲ့ တငျးမာအေးစကျမှုတှကွေောငျ့သူ့အတှကျ ညီမက ဘာဖွဈခဲ့ရလဲလို့ တှေးမိပီးအရမျးစိတျထိခိုကျရပါတယျ
သူ့ကို အရမျးခဈြပါတယျသူမရှိမှာလညျး အရမျးကွောကျပါတယျခုထိလညျး သူ့ ကို ဆကျသှယျမိနတေုနျးပါပဲ
သူကတော့ အဖကျလုပျခငျြမှ လုပျတယျဒါပမေယျ့သူအကူအညီတောငျးရငျ လုပျပေးမိတုနျးပဲ
သူကတော့ တခွားလူနဲ့ ယူမှာ လို့တောငျထုတျပွောပါတယျသူ့ကို ပွနျနာကငျြစခေငျြတယျ
ညီမခံစားရတာ နဈနာဆုံးရှုံးရတာတှကေိုသူ ကိုယျခငျြးစာတတျစခေငျြတယျသူကတော့ ဘာမှမခံစားရ ဘာမှမဖွဈသလိုပဲ
ညီမ ဘာလုပျရမလဲအကုနျလုံးက ညီမပဲမှားနတောလား
ကြေးဇူးပွုပွီး ညီမကို အကွံပေးကွပါဦး
မိနျးမသားတို့အဖွေ Comment မြား
A : ညီမ ရေ….ညီမဘဝလေး ငွိမျးခမျြးခငျြရငျတော့ အခုခဈြသူနဲ့အဆကျဖွတျလိုကျပါတော့ ရှဆေ့ကျသှားရငျ ညီမ တဈဘဝစာလုံးပူပငျသောကတှမြေားနရေမယျ စိတျခမျြးသာရမှာမဟုတျတော့ဘူး….အသညျးကှဲလို့ ခံစားရရငျ…ငိုကွှေးရရငျ အလှနျဆုံးမှ တဈနှဈပေါ့ကှာ…အသညျးကှဲခံလိုကျပါ…ဘဝတဈခုလုံးစာနာကငျြခံစားနရေမှာနဲ့စာရငျသကျသာပါတယျနျော…ခဈြလို့ပွောတာပါနျော
B : ညီမလေး အဈမကတော့မိနျးကလေးဆိုတာ မာနလေးထားပေးရတယျထငျတယျ ကိုယျ့ကိုကိုယျခဈြတတျတဲ့ မာနပေါ့ သူတောငျ ညီမနာကငျြတာကွညျ့နရေကျရငျ ညီမကရော ဘာလို့ စိတျမပွတျနိုငျရမှာလညျး နရောတကာ မှနျလိုကငျြ့တာမကောငျးပမေယျ့ ဒီလိုနရောမှာတော့ မှနျလိုကငျြ့တာအကောငျးဆုံးပဲထငျတယျ
C : လမျးခှဲလိုကျပါသူကလိုသုံးလုပျနတောလကေိုယျပဲနဈနာမှာပေါ့ဖုနျးနံပါတ့ပါပွောငျးလိုကျပါfbအကောငျ့တှဖေကျြလိုကျအသဈဖှငျ့လိုကျကိုယျ့ကိုအကောငျးဆုံးနကေိုယျနဲ့မှမတနျတာသူကကိုယျကိုအရမျးခဈြနရေငျတော့နားလညျပေးလို့ရသေးတယျသူမြားကိုယူမယျလို့အထိလငျးပွောနတောဘာတှအေနဈနာခံနစေရာလိုသေးလို့လဲအဆကျသှယျမလုပျတာအကောငျးဆုံးပါပဲ
D : ပွတျသားလိုကျစခေငျြတယျ။ကိုယျ့ဘကျက ကောငျးခဲ့တာကို အဲလိုလုပျတယျဆိုတော့ ။ မိနျးကလေးမာနနဲ့ မပေ့ဈစခေငျြတယျ
E : အလိုသူမရှိတဲ့ဘဝမှာအဆငျပွပွေနေတောလေးကိုလဲနောကျထပျမွငျခငျြပါသေးတယျ
ဒီ Post လေးမှာတော့ Comment (အကွံပေးသူ)ပေါငျး 230 ကြျောရှိပွီး အဲ့ထဲကမှ အနညျးငယျကို ဖျောပွပေးလိုကျရခွငျးဖွဈပါတယျ
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးတွေ မျှဝေခဲ့တာဆိုရင် အမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့ (၈) ထိပြီးခဲ့ပါပြီ . . .
အခု အမှတ်စဉ် (၉) အနေနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ထားတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . .
ညီမချစ်သူက ညီမအပြင်နောက်ကောင်မလေးထားပါတယ် မသိအောင်ထားတာပေမယ့်မစုံစမ်းရပဲပေါ်လာတာချည်းပါပဲ
အဲ့ဒါကို သူက သူ့ကိုအပြစ်ပြောလို့ စိတ်ပျက်ပါတယ်တဲ့ ညီမသိလိုက်ရတာ ၄ယောက်တောင်ရှိနေပါပီ
ညီမမှာ သူ့အရင်ကလည်း ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှ မရိုးမသားမပတ်သက်သလိုသူနဲ့ချစ်သူ ဖြစ်ပီးတော့လည်း သူ့အပြင်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး
သူနဲ့စကြိုက်ထဲက တစ်နိုင်ငံစီဖြစ်နေတာပါသူ မြန်မာပြည်ပြန်လာတော့လည်း တစ်မြို့စီနေနေရပေမယ့်
ညီမဘက်က ဒီနေ့ထိ သူ့ပေါ်သစ္စာမပျက်ပါဘူးသူ့လုပ်ရပ်က တစ်ခါနှစ်ခါ မ ကလို့ပြောမိတဲ့သူက မှားသွားလားရှင့်
ညီမဘက်က သူ့ပေါ် မဟုတ်တာလုပ်ဘူးရင် ဖြေသာပါသေးတယ်
ခုတော့ သူ အကူအညီလိုတိုင်း ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူကသူ့အတွက် ဘာမှမဟုတ်သလိုပါပဲ
ညီမလေ အပိုမပြောပါဘူး သူနဲ့အပြင်သွားရင်busကားခ ၂၀၀တောင် ညီမပဲပေးတာပါ
သူက ပဲခူးကပါ ခု သူတို့နားက မိန်းကလေးနဲ့ထပ်ကြိုက်နေပါတယ်သူတို့ ၂ယောက်ပုံတွေပို့လာတယ် ပြတ်ချင်တယ်ပေါ့
သူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့အစ်မကိုပြောပြတော့လည်းကိုယ်ပဲ ငြိုငြင်ခံရတယ်ညီမက သူ့အတွက် ဘယ်လိုလူဖြစ်ခဲ့ရလဲ မသိတော့ပါဘူး
သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာ ၄နှစ်ကျော်ပါပီစကြိုက်တုန်းက သူ့အစ်မအရင်း ဝမ်းကွဲတို့နဲ့ ပေးသိတယ်
ပေးသိလို့လည်း တကယ်ချစ်တယ်ထင်ခဲ့ပါတယ် နောက်တော့ အစ်မရင်းက လူမျိုးမတူလို့ အသိုင်းအဝိုင်းမတူလို့ သဘောမကျဘူးဆိုလို့ silentတွဲခဲ့တာ ဒီနေ့ထိပါပဲ
ခုတော့ ညီမကို လူရာမသွင်းတာလို့ပဲ နားလည်လိုက်ပါတယ်ညီမဆီကတော့ အကျိုးအမြတ်အကုန်ယူတာပဲ
သူ က ညီမကို အရူးလုပ်နေလည်းသူ အဆင်မပြေဘူးလို့ ငြီးတွားလာရင်မကြည့်ရက်တော့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးမိတာချည်းပဲ
ခု ကြိုက်နေတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ ဆိုညီမသိသွားတာတောင် ဂရုမစိုက်ပဲ rsတင်ပါတယ်
ညီမလေ အကုန် ပြောပစ်လိုက်ချင်ပေမယ့်ပြောမိရင်လည်း ကိုယ်ကပဲငြိုငြင်ခံရမှာမို့လူမသိတဲ့ကွယ်ရာမှာ အလူးအလှိမ့်ပဲ
သူ့လုပ်ရပ် ညီမအပေါ် ဆက်ဆံနေတဲ့ တင်းမာအေးစက်မှုတွေကြောင့်သူ့အတွက် ညီမက ဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲလို့ တွေးမိပီးအရမ်းစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်
သူ့ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်သူမရှိမှာလည်း အရမ်းကြောက်ပါတယ်ခုထိလည်း သူ့ ကို ဆက်သွယ်မိနေတုန်းပါပဲ
သူကတော့ အဖက်လုပ်ချင်မှ လုပ်တယ်ဒါပေမယ့်သူအကူအညီတောင်းရင် လုပ်ပေးမိတုန်းပဲ
သူကတော့ တခြားလူနဲ့ ယူမှာ လို့တောင်ထုတ်ပြောပါတယ်သူ့ကို ပြန်နာကျင်စေချင်တယ်
ညီမခံစားရတာ နစ်နာဆုံးရှုံးရတာတွေကိုသူ ကိုယ်ချင်းစာတတ်စေချင်တယ်သူကတော့ ဘာမှမခံစားရ ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ
ညီမ ဘာလုပ်ရမလဲအကုန်လုံးက ညီမပဲမှားနေတာလား
ကျေးဇူးပြုပြီး ညီမကို အကြံပေးကြပါဦး
မိန်းမသားတို့အဖြေ Comment များ
A : ညီမ ရေ….ညီမဘဝလေး ငြိမ်းချမ်းချင်ရင်တော့ အခုချစ်သူနဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့ ရှေ့ဆက်သွားရင် ညီမ တစ်ဘဝစာလုံးပူပင်သောကတွေများနေရမယ် စိတ်ချမ်းသာရမှာမဟုတ်တော့ဘူး….အသည်းကွဲလ်ို့ ခံစားရရင်…ငိုကြွေးရရင် အလွန်ဆုံးမှ တစ်နှစ်ပေါ့ကွာ…အသည်းကွဲခံလိုက်ပါ…ဘဝတစ်ခုလုံးစာနာကျင်ခံစားနေရမှာနဲ့စာရင်သက်သာပါတယ်နော်…ချစ်လို့ပြောတာပါနော်
B : ညီမလေး အစ်မကတော့မိန်းကလေးဆိုတာ မာနလေးထားပေးရတယ်ထင်တယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်တဲ့ မာနပေါ့ သူတောင် ညီမနာကျင်တာကြည့်နေရက်ရင် ညီမကရော ဘာလို့ စိတ်မပြတ်နိုင်ရမှာလည်း နေရာတကာ မှန်လိုကျင့်တာမကောင်းပေမယ့် ဒီလိုနေရာမှာတော့ မှန်လိုကျင့်တာအကောင်းဆုံးပဲထင်တယ်
C : လမ်းခွဲလိုက်​ပါသူကလိုသုံးလုပ်​​နေတာ​လေကိုယ်​ပဲနစ်​နာမှာ​ပေါ့ဖုန်းနံပါတ့ပါ​ပြောင်းလိုက်​ပါfbအ​ကောင့်​​တွေဖျက်​လိုက်​အသစ်​ဖွင့်​လိုက်​ကိုယ့်​ကိုအ​ကောင်းဆုံး​နေကိုယ်​နဲ့မှမတန်​တာသူကကိုယ်​ကိုအရမ်းချစ်​​နေရင်​​တော့နားလည်​​ပေးလို့ရ​သေးတယ်​သူများကိုယူမယ်​လို့အထိလင်း​ပြော​နေတာဘာ​တွေအနစ်​နာခံ​နေစရာလို​သေးလို့လဲအဆက်​သွယ်​မလုပ်​တာအ​ကောင်းဆုံးပါပဲ
D : ပြတ်သားလိုက်စေချင်တယ်။ကိုယ့်ဘက်က ကောင်းခဲ့တာကို အဲလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ ။ မိန်းကလေးမာနနဲ့ မေ့ပစ်စေချင်တယ်
E : အလိုသူမရှိတဲ့ဘဝမှာအဆင်​​ပြေ​ပြေ​နေတာ​လေးကိုလဲ​နောက်​ထပ်​မြင်​ချင်​ပါ​သေးတယ်​
ဒီ Post လေးမှာတော့ Comment (အကြံပေးသူ)ပေါင်း 230 ကျော်ရှိပြီး အဲ့ထဲကမှ အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Categories Tameelay Knowledge Tags 05 Post navigation